လီမွန်ကြက်သားကြော် | Wutyee Food House
ကြက်ခြေထောက် တုံယမ်းဟင်းချို »
October 7, 2010 by chowutyee လီမွန်ကြက်သားကြော်
လီမွန်ကြက်သားကြော်က လီမွန်နဲ့ ရောကြော်ထားတာမို့ လီမွန် အနံ့လေးရော၊ အရသာလေးပါ စားလို့ ကောင်းပါတယ်… ထမင်းနဲ့ တွဲစားဖို့လည်း အလွန်လိုက်ဖက်တဲ့ တရုတ်ဟင်းလျာ တစ်မျိုးပါပဲ။ တူတူချက်ကြည့်ရအောင်…
၁။ ကြက်ရင်ဗုံသား – ၁၅ကျပ်သား (၁လက်မအရှည်အစောင်းလှီးပါ)
၂။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၃။ ကြက်သားမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၄။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – အနည်းငယ်
၅။ ခရုဆီ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၆။ နှမ်းဆီ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ
ရ။ ဂျုံမှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၅ဇွန်း
၈။ လိမ္မော်ခွံ – အနည်းငယ် (ခြစ်တံဖြင့် စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်စာ ခြစ်ထားပါ)
၁။ လိမ္မော်သီး – ၁လုံး (အခွံနွှာ အစေ့ထုတ်ထားပြီ အရည်ညစ်ရန် အဆင်သင့်လုပ်ထားပါ)
၂။ ဗနီဂါ – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
၃။ ပဲငံပြာရည်အရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၅။ ရေ (သို့) ကြက်ပြုတ်ရည် ( လက်ဖက်ရည် ပန်းကန်လုံး တစ်လုံးစာ)
၆။ ကော်မှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း၁ဇွန်း
ရ။ ကြက်သွန်နီ – တ၀က် (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပါ)
၈။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၂မွှာ (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပါ)
၁။ အရင်ဆုံး ပါးပါးလှီးထားသော ကြက်သားများကို ပါဝင်ပစ္စည်များ ( ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ခရုဆီ၊ နှမ်းဆီ) တို့ဖြင့် သမအောင် ဇောက်ခွက်တစ်ခုထဲတွင် ရောနယ်လိုက်ပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ရောနယ်ထားသော ကြက်သားများကို ဂျုံမှုန့် များဖြင့် ကပ်ပေးပါ။
၃။ ကြက်သား စကြော်လို့ ရပါပြီ။ ဒယ်ထဲကို ဆီများများ ထည့်ပြီ ကြက်သားများကို မကပ်စေရန် ၂သုတ်လောက် ခွဲပြီ မီးအသင့်တင့်ဖြင့် အညှိရောင်သန်းသည် အထိ ကြော်ပေးပါ။
၄။ အညှိရောင်သန်းလာပြီ ဆိုလျှင် ကြက်သားများကို ဆီစစ်၍ ပြန်ဖယ်ထားပေးပါ။
၅။ ကြက်သားကြော်ပြီလျှင် ဆော့မချက်မီ လိမ္မော်သီးကို အဖတ်များ မပါပဲအရည်ရအောင် ဇကာဖြင့် ညှစ်ထုတ်ပေးပါ။
၆။ ပြီးလျှင် ဆော့စချက်ပါတော့မည်။ ဒယ်ထဲသို့ ဆော့ချက်ရန် ပါဝင်ပစ္စည်များ ဖြစ်သော (လိမ္မော်ရည်၊ ဗနီဂါ၊ ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ သကြား၊ ရေ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ) တို့ကို ထည့်ပြီ မီးအသင့်တင့်ဖြင့် ၁မိနစ်ခန့် ဆူအောင် တည်ထားလိုက်ပါ။
ရ။ ဆူလာလျှင် အရသာ အပေါ့အငံ့ကို မြည်း၍ အနေတော်လျှင် ကြော်ထားသော ကြက်သားများ နှင့် လိမ္မော်အနံ့မွှေးအောင် ခြစ်ထားသော လိမ္မော်ခွံများကို ထည့်ပြီ ရောမွှေလိုက်ပါ။
၈။ ပြီးမှ ကော်မှုန့် (စားပွဲတင်ဇွန်း၁ဇွန်း)ကို ရေအနည်းငယ်ဖြင့် ဖျော်၍ ဒယ်ထဲသို့ လောင်းချလိုက်ပါ။
၉။ လိမ္မော်အနံ့အရသာ မွှေးကြိုင်နေသည့် လီမွန် ကြက်သားကြော်ကို ထမင်းနဲ့ မြိန်ရှပ်စွာ စားသုံးနိုင်ပါပြီ….
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 24 Comments	24 Responses
on October 7, 2010 at 3:16 pm | Reply hmone
wow looking yummy and very nice…wana eat … don’t only treat to mkt…treat me too
on October 8, 2010 at 4:36 am | Reply chowutyee
ှုငါအမွှာလေးကို ပဲ ကျွေးချင်တာ.. ဖက်တီးက အတင်း လိုက်ကပ်စားနေလို့ မတတ်သာပဲ ကျွေးနေရတာ.. ဟီးဟီး
on October 7, 2010 at 4:16 pm | Reply Kay Kay
Sis..Sauce အရည်ကို ပုံထဲမှာမတွေ့ဘူးနော်..အရည်က ကြက်သားကိုနည်းနည်းစိုရုံ ထည့်ရတာထင်တယ်နော်..
on October 8, 2010 at 4:38 am | Reply chowutyee
ဆော့ရည်ချက်ပြီ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ မေ့သွားလို့ပါ… ဆော့ရည်ကို စိုရုံပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆော့ရည်ချက်ပြီ ကြော်ထားသော ကြက်သားထည့်ကာ ကော်မှုန့်ထည့်လိုက်လို့ ကြက်သားနဲ့ ဆော့ရည်နဲ့ ရောမွှေလိုက်သလို ဖြစ်သွားတာပါ။🙂
on October 7, 2010 at 4:26 pm | Reply ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့)
လီမွန် ကြက်သားကြော်။ တစ်ခါမှ စားဖူးဘူးးး။ မြည်းကြည့်ချင်တယ်။ ချိုချဉ် ဆိမ့်မွှေးလေး နေမှာနော်။ ကြုံရင် မြည်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ စေတနာပါပါနဲ့ ဟင်းချက်နည်းလေးတွေကို တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
on October 8, 2010 at 4:39 am | Reply chowutyee
ဟီးဟီး ကျွေးဖို့ အခွင့်အရေးကြုံရင် ကိုကိုမောင်ကို ဟင်းတွေ အများကြီး ချက်ကျွေးချင်ပါတယ်နော်.. အင်္ဂလန်လာလည်မှ ကျွေးတော့မယ်..🙂
on October 8, 2010 at 8:20 am | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ရောက်အောင် လာစားမယ်
on October 8, 2010 at 10:44 am | Reply chowutyee
ဟီးဟီး… ထမင်းဆိုင်ဖွင့်ရင်တော့ ၀တ်ရည်အမျိုးသား စားတာနဲ့ အရှုံးပေါ်မှာ သေချာတယ်…🙂
on October 8, 2010 at 9:11 am | Reply နွေးနေခြည်
ဒါမျိုးကို ဟော်တယ်မှာပဲ စားဖူးတာ။ ဆော့ကို အသီးကနေ ချက်တာဆိုတော့ လတ်ဆတ်နေမှာပဲ။ ကောင်းတယ်။ ကျေးဇူး ငရီး)
on October 8, 2010 at 10:45 am | Reply chowutyee
သူငယ်ချင်း ပြန်လာရင် ချက်ကျွေးမယ်လေ.. ဒီနှစ်ကုန်လား..😛
on October 8, 2010 at 4:04 pm | Reply Pearl Lin Phyu
on October 9, 2010 at 3:33 pm | Reply chowutyee
Pearl ကိုလည်း ကျေးဇူးပါ..
on October 9, 2010 at 11:44 am | Reply nyimuyar
စားလို့ကောင်းမယ့်ပုံပဲ နည်းမျှတာ ကျေးဇူးပါ
on October 9, 2010 at 12:32 pm | Reply nyimuyar
မုန့် လုပ်နည်းတွေ တွေ့ လို ဘဲသားမုန့်လုပ်နည်းလေး များ သိရင် မျှဝေပါဦးလို့ 
ဘဲသားမုန့်တော့ မလုပ်တတ်ဘူး… ဒါပေမယ့်တချက် ချက်နည်းလေး ရှာကြည့်ပေးပါ့မယ်…🙂
on October 9, 2010 at 11:45 pm nyimuyar
မုန့် လုပ်စားနေကြမဟုတ်တော့ ဘယ်လို လုပ်ရမှန်းမသိလို့ ပါ။ နေရာတကာ လျှောက်မေးနေတာပဲ ဘယ်သူမှ သိပ်မသိကြလို့ ပါ။ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။
on October 12, 2010 at 11:58 pm | Reply wai
concentrated orange juice နဲ့ရောချက်လို့ရလား မ၀တ်ရည်။ ဒီမှာ orange တွေကဈေးကြီးနေတဲ့အချိန်မို့ပါ။
on October 13, 2010 at 8:29 am | Reply chowutyee
wai ရေရပါတယ်.. orange juice နဲ့ဆို ပိုတောင် ကောင်းပါသေးတယ်..🙂
on October 15, 2010 at 11:18 pm | Reply ငယ်ဇော်
Orange Chicken ဆိုပြီး ရယ်ဒီမိတ်ဗူးကို ဝယ်စားဖူးပါတယ်
မဝတ်ရည်ရဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး ချက်စားကြည့်တာ အဆင်ပြေပါတယ်
ဘာဟင်းချက်စားရမှန်းမသိရင် မဝတ်ရည်ရဲ့ ဟင်းချက်နည်းလေးတွေ လာဖတ်ပြီး ချက်စားဖြစ်ပါတယ်🙂
on December 11, 2010 at 7:47 pm | Reply khunmyo
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Golden Duck မှာ ငါးလီမွန်ဆော့စ်စားဖူးပီးတော့ lemon sauce ကိုလိုက်ဝယ်တာ မရပါ။ အခုလို ဖတ်ရတော့ အ၇မ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်….. နောက်လဲ ဟင်းချက်နည်း ထပ်တင်ပေးဦးနော် ….
on December 17, 2010 at 5:33 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်.. ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်…😀
on September 12, 2013 at 5:20 pm | Reply su pyae